पासलाक्पा शेर्पा गौरी शंकर गाउँपालिका वडा नं. ३, दोलखामा जन्मिए । उनका बुबा कामी र आमा डुकुलोमु शेर्पा हुन् । उनका २ दाजुभाई र २ दिदि छन् ।
उनको बाल्यकाल लगभग १० बर्षसम्म गाँउमै (सेरकाप्ती) बितायो । प्राथामिक शिक्षा पनि त्यहाँबाटै हासिल गरे । गाउँमै पाँच कक्षासम्म पढ्न विद्यालयको व्यवस्था भएपनि पुग्न भने एक घण्टाको बाटो हिड्न पथ्र्यौ । पासलाक्पा सानैदेखि पढ्नमा अभिरुची थियो । उनलाई पढ्न सानैदेखि रमाईलो लाग्थ्यो ।
निम्न माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्न गाउँकै अर्को विद्यालय जानु पथ्र्यौ । साढे दुई घण्टा हिँडेर जानु पर्ने वाध्यताका कारण आमाबाले विद्यालय नै परिवर्तन गरिदिनु भयो ।
गाउँमा स्कूल टाढा भएकै कारण गाँउ छोडेर दोलखा कै सानो तर सुन्दर बजार सिंगटीमा बसेर पढाई अघि बढाइयो । एसएलसीपछि उच्च शिक्षाको लागि परिवार नै काठमाण्डौ आए । अहिले स्नातक तह अध्यनरत छन् । उनले बालाजु स्कूल अफ इन्जिनियरिङ इण्ड टेक्नोलोजिबाट इलेक्ट्रोनिक्स सव–इन्जिनियर उत्तीर्ण गरे ।
बाल्याकाल सामान्य रुपमा विताएका पासलाक्पा सानैदेखि निक्कै जिज्ञासु र चतुर थिए । निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा हुर्किएका पासलाक्पा पढाईसँगै विभिन्न अत्तिरिक्त विषयमा समेत चासो देखाउने र सहभागि हुन थाले ।
अहिले उनी रंग क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । नाटकको माध्यमबाट सामाजिक परिस्थितीलाई जिवितै उतार्ने प्रयास उसलाई पनि असाध्यै मन पर्छ र त्यसैको अनुसरण गर्दै अघि बढेका छन् । उनी आफ्नो सबैभन्दा पहिलो बिषय नाटक नै हो भन्छन् । ‘मनपर्ने विधा अभिनय हो, मलाई फुर्सदमा पढ्न, नाटक हेर्न एकदम मनपर्छ, फिल्म हेर्न, कविता, गजल र गीत सुन्न मन पराउँछु ।’ उनी भन्छन् ।
जीवनकाल व्यातित् हुँदै गर्दा विगत केही समयदेखि उनको सर्वनाम थिएटरसँगको सम्बन्ध स्थापित हुन पुग्यो । अभिनयमा रूचि पहिल्यैदेखि भएकाले उनी समयसमयमा नाटक हेर्न थिएटर पुग्थे । ‘सानैदेखिको रुची हो । तर, सिक्ने ठाँउ खासै थिएन ।
काठमाण्डौ छिरेपछि पनि दुईबर्षसम्म म पढाईमा नै ब्यस्त भएँ ।’ पासलाक्पा भन्छन् ‘मलाई नाटकहरू हेर्न जान औधी मन लाग्थ्यो तर साथीहरूको खासै रूची देखाउँदैनथे । धैर्यताको बाँध हुने रहेछ । आफ्नो रूचीको बिषय भएकोले मैले साथी नगएपनि एक्लै भएपनि थिएटरहरू तिर नाटक हेर्न जान थालँे, मैले सबैभन्दा सुरूमा हेरेको नाटक सर्वनाम थिएटरको प्रस्तुति नाटक ‘बुख्याचाँ मन’ हो ।’
उनी थप्छन् ‘संयोग मान्नु पर्छ यो नाटकको कलाकार निर्देशक र लेखक अहिले मेरो गुरू हुनुहुन्छ, म त्यो नाटक र कलाकारहरूको अभिनयबाट यति प्रभावित भएँ कि समयकालमा म त्यही थिएटरमा सिक्न थालेँ ।’
अभिनय सिक्दै जाने क्रममा सर्वनामकै १२ औं व्याचका प्रशिक्षार्थी समूहबाट नाट परिवन्द परिकल्पना भयो । त्यही नाटकको मूख्य भूमिकामा पासलाक्पालाई हामी देख्न सक्छौं । ‘सोचेकै थिएन यसरी परिवन्दमा परिन्छ भनेर’ पासलाक्पा भन्छन् ‘नाटकमा अभिनय गर्दा खुशी मिल्छ, आनन्द लाग्छ, आत्मसन्तुष्टी मिल्छ ।’
यही परिवन्द अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छाएको छ । दैनिक पत्रिकाहरुमा समाचारहरु दिनानुदिन प्रकाशन भएका छन् । सर्वत्र ‘परिवन्द’ को चर्चा छ र त्यही परिवन्द भित्रको एउटा पात्र पासलाक्पाले पनि उत्तिकै वाहीवाही पाएका छन् । उनको अभिनयमा ‘एक प्रकारको शक्ति छ ।’ पत्रकार महासंघ ओखढुंगाका अध्यक्ष दीपेन्द्र रुम्दालीले नाटक हलबाट वाहिर निस्किने वित्तिकै प्रतिक्रिया दिए । ‘भविष्यमा राम्रो कलाकार भएर समाज परिवर्तनमा पासलाक्पाले राम्रो भूमिका खेल्छ ।’ उनले थपे ।
परिवन्दले सर्वत्र चर्चा पाइरहेको सन्दर्भमा उनैलाई परिवन्द के हो भन्ने सोधनी गर्दा पासलाक्पा यसो भन्छन् ‘हाहाहा... परिवन्दको बारेमा भन्नु नै पर्दा चाँही पूर्वीय जीवनशैलीसँग सम्वन्धि नाटक हो । तर, यसको अर्थ चाही ‘परिवन्द’ भन्नाले कुनैपनि मानिस विभिन्न कारणले चारैतिरबाट उम्कन नपाउने गरी फस्नु हो ।’
‘जीवन भोगाई नाटक वा अभिनयको तुलना पर्दा नाटक एउटा जीवन हो ।’ भन्ने उनको बुझाई छ । ‘अभिनय चाही जीवन जिउन जान्ने कला हो ।’ उनी थप्छन् ‘जसमा हामी आफ्नो जीवनभन्दा फरक स्वभाव, मानसिकता र चरित्र भएको मानिसहरूको जीवन बाँच्छौ, कलाकार हुनुको एउटा मज्जा लाग्ने फाइदा यही हो । हामीलाई एउटै जीवनमा फरक–फरक जीवन बाँच्ने अबसर मिल्छ, जीवन भोगाई नाटक हैन तर नाटक चाही जीवन हो भोगाई हो ।’
वैशाख १ देखि १५ सम्म सर्वनाम थिएटरमा मन्चन भएको ‘परिवन्द’ मा पासलाक्पा पारुहाङ नामबाट अभिनयमा छन् ।
पासलाक्पा परिवन्दमा मात्रै होइन अभिनयलाई नै निरन्तरता दिने प्रतिज्ञा गर्छ । राम्रो अभिनेताको रूपमा स्थापित हुन अझै धेरै सिक्नुपर्ने बाँकी रहेको उनी सुनाउँछन् । सिक्नै पर्ने कुराहरू एकदम धेरै रहेको बताउने उनी आफूलाई रङ्गमञ्चमा भर्खरै बामे सार्दै गरेको बालक सम्झन्छन् । ‘बिस्तारै हिड्नु छ, मज्जाले हिड्न सिकेपछि मात्रै दौडन सक्ने हुनुछ ।’ रङ्गमञ्चमा आफ्नो प्राथामिकता अभिनयमा रहेको बताउने पासलाक्पा अभिनयलाई अझै धेरै निखार्नु छ ।’ भन्छन् । यसबाट आफ्नो व्यक्तित्व विकास र बौद्धिकस्तरसम्म माथि उठ्नेमा विश्वास्त रहेको पासलाक्पा भन्छन् ‘आफूलाई तिखार्नु छ । त्यसपछि अरू प्राविधिक कुराहरू पर्छन् । त्यसमा पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।’ उनी अभिनयसँग–सँगै पढाइलाई निरन्तरता दिने योजनामा छ ।
पासलाक्पाको बुझाईमा नाटक के हो त ? भन्ने प्रश्नमा उनी केही मलिन हुँदै जवाफ दिन्छन् ‘नाटक यही हो भनेर परिभाषित गर्नसक्ने क्षमता मसँग छैन । कुनैदिन म नाटकलाई परिभाषित गर्दै हिड्न थाले भने त्यो दिन सायद म रङ्गमञ्चमा हँुदिन हुँला ।’
शेर्पा समुदाय र रङ्गमञ्चको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि आफू क्रियाशिल रहने बताउँदै पासलाक्पा भन्छन् ‘समुदायमा रहेको बिषयबस्तुबाट प्रभावित भएर रङ्ग प्रस्तुति तयार गर्छौ र त्यही रङ्ग प्रस्तुतिले त्यही समुदायबाट आएका दर्शकमाथि आफ्नो प्रभाव छाड्छ, समुदायभन्दा बाहिर रङ्गमञ्च छैन ।’
र हाम्रो थिएटरको गन्तव्य “रङ्गमञ्चिय कला संस्कृतिको विकास गर्दै यसैको माध्यमद्वारा असल समाज र समृद्ध मानवीय मूल्यको स्थापना गर्नु हो ।’ ‘हामी यही गन्तव्यसम्म पुग्न यात्रारत छौ, थाहा छैन । हामी कति सफल हुन्छौ ।’ उनले भने ।
हाम्रो समुदाय वास्तवमा नाटक हेर्न थिएटरसम्म धाउने अवस्थामा छैन । नाटक के हो भन्ने बुझाईको कमिले सायद हुन सक्छ । पासलाक्पा भन्छन् ‘पहिला थिएटरसम्म आएर नाटक हेरिदिनुस् । त्यसपछि सवै थाहा पाइहाल्नु हुनेछ ।’
शेर्पा समुदायको परिचय दायरा थप फराकिलो र बहुआयमिक बनाउनुपर्ने पासलाक्पाको धारण छ । ‘हरेक क्षेत्रमा हामीले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ‘बर्षौदेखि चल्दै आएको चिनिदै आएको हिमाल चढ्ने शेर्पा, भारी बोक्ने शेर्पा मात्र नभएर हामीले आफ्नो क्षमता हरेक क्षेत्रमा देखाउनु पर्छ ।’ परिचायलाई वहुआयमिक बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरूरी रहेको उनको बुझाई छ । ‘हाम्रो समुदायको लागि हामीले नगरे कसले गरिदिन्छ त ? म रङ्गमञ्चमा छु, यसको मतलब म सबैलाई रङ्गमञ्चमा लाग्नुस भन्न चाहान्न तर जुनसुकै क्षेत्रमा होस आफूलाई मन पर्ने क्षेत्रमा मिहेनतका साथ लाग्नुभयो भने एकदिन अवश्य सफल भइन्छ ।’
पासलाक्पा आफूलाई धैर्यवान युवाको रुपमा परिभाषित गर्छन् र भन्छन् ‘मिहेनत गर्नुस हरेक क्षेत्रमा सफल भइन्छ । म रङ्गमञ्चमा मिहेनत गर्छु । तपाईहरु आफ्नो रूचीको क्षेत्रमा मिहेनत गर्नुहोस् ! सफलता कसो नमिल्ला र ?’
शेर्पा समुदायबाट रंगक्षेत्रमा पाइला चालेर सफलताको सिँढी उक्लिँदै गरेको व्यक्ति सायदै पासलाक्पा होलान् । हिमाल आरोहण, विभिन्न नयाँनयाँ अबिष्कारमा शेर्पाहरुले पाइला चालीरहेको बेला पासलाक्पाले भने रंग मञ्च रोजेका छन् । उनको अभिनय यात्राले शेर्पा समुदायको हरेक विषयहरु प्रतिविम्बित गरोस्, शुभकामना !
लु हेर्नुस नाटक परिवन्दकाे ट्रेलर। मन परे नाटक हेर्न अाउनुस है। नाटक "परिवन्द" साँझ ५:१५ बजे शनिबार दिउँसाे १ बजे अतिरिक्त शाे। सर्वनाम थिएटर कालिकास्थान काठमाण्डाै ०१-४०११०२७, ९८४१८७२७१०
Posted by Raj Shah on Friday, 20 April 2018